कोरोना अन्त्य गर्न ५ पटक हनुमान चालिसा पढ्न भाजपा सांसदको आग्रह
भारतीय जनता पार्टीकी नेतृ तथा सांसद प्रज्ञा ठाकुरले हालै जनतालाई हनुमान चालिसा पढेर प्रार्थना गर्न आग्रह गरेकी छन् । उनले ‘कोरोनाभाइरस महामारीबाट विश्वलाई छुटकारा’ भन्दै प्रार्थना गर्न पनि उनले आग्रह गरेकी छन् । भारतको भोपालकी सांसद ठाकुरले अगस्ट ५ सम्म हरेक दिन पाँच पटक हनुमान चालिसा पढ्न आग्रह गरेकी हुन् । जसले गर्दा कोरोना महामारी अन्त्य हुने उनको जिकिर छ ।
अगस्ट ५ अर्थात्, अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणको उद्घाटन गर्ने दिनसम्म यस्तो प्रार्थना गर्नाले महामारी अन्त्य हुने उनको जिकिर छ । ठाकुरले ट्वीटरमा एक भिडिओ समेत सार्वजनिक गरेकी छन् । यससँगै भुपालमा अगस्ट ४ सम्म लकडाउन जारी रहनेछ ।
‘जब जनताले, देशसँगै विश्वभरका हिन्दूले एकै स्वरमा हनुमान चालिसा पढ्छन्, यसले पक्कै काम गर्नेछ । र हामी कोरोना भाइरसबाट मुक्त हुनेछौँ । यो रामसँग तपाईँको प्रार्थना हुनेछ,’ सांसद ठाकुरले भनेकी छन् ।
काठमाडौको कपनस्थित आकाशे धारामा झाडीमा एउटा बाकसभित्र ४ ५ दिनकी एक नाबालिक बच्चा फेला परेकी छिन् । केयर बाल गृहका नानीहरु बारिमा खेल्न जाँदा भेटेर केयर बाल गृहकी सन्चालिका पुष्पा अधिकारीले संरक्षण गरि सुरक्षित राखेकी छिन् ।
टेस्टी बिस्कुटको बाकसमा कपडामा बेरिएको अवस्थामा भेटिएकी बालिकालाई अहिले आमा बनेर पुष्पा अधिकारीले हेरचाह गरिरहेकी छिन् । यति सुन्दर अनि निर्दोष बच्चालाई यो बर्षायाँमको समयमा त्यसरी छाडेर जाने आमा कति निर्दयी होलिन् ? त्यसरी फाल्नु नै थियो भने यी नाबालिकालाई संसारमा जन्म नै किन दिईन् होला ?
कसको बच्चा हो थाहा छैन तर जो कोहि आमाले यो नवालक बच्चालाई यसरि छाडेर गएको हो उसलाई यो पापले कहिले छाड्ने छैन । बच्चा जन्माउनु मात्र ठुलो कुरा हैन तर बच्चाको उचित हेरचाह गर्नु पनि हरेक बाबु आमाको दयित्व हो । बाँकी भीडीयोमा हेर्नुहोला :